Muvhuro, Zvita 28, 2020 Chipiri, Zvita 29, 2020 Douglas Karr
Mazhinji makambani anotumira email anonyatso fungidzira kuti kuregedza kwakawanda kunogona kukanganisa sangano ravo. E-mail yakanaka, yakavakwa zvakanaka, uye inoshanda kwazvo inogona kukwira mujunk folda yemumwe munhu akanyorera uye achishuvira kushandurwa nekambani yako. Iyo yakaipa mamiriro ezvinhu kuve mairi. Zvakatoipisisa, ungatotadza kuziva kuti maemail ako ari kuendeswa kune zvisina basa kunze kwekunge uri kushandisa yekushandisa inbox yekutarisa. Kurudziro yangu yeiyi vatinoshanda navo pa
Infographic: Nongedzo yekugadzirisa matambudziko Email Kuburitswa Kwenyaya
Chishanu, December 11, 2020 Chishanu, January 22, 2021 Bob Croft
Kana maemail achibhururuka anogona kukonzera kukanganiswa kwakawanda. Izvo zvakakosha kuti usvike pasi payo - nekukurumidza! Chinhu chekutanga chatinofanira kutanga nacho kuwana nzwisiso yezvinhu zvese zvinopinda mukuendesa yako email kuinbox… izvi zvinosanganisira kuchenesa kwako data, IP mbiri yako, yako DNS kumisikidzwa (SPF neDKIM), zvemukati, uye chero kushuma paemail yako se spam. Heano infographic inopa iyo
5 Matipi Ekuvandudza Yako Ehoridhe Email Chiitiko muna 2017
Muvhuro, Mbudzi 13, 2017 Douglas Karr
Vedu vatinoshanda navo pa250ok, email yekuita chikuva, pamwe neHubspot neMailCharts vakapa data rakakosha uye misiyano nemakore maviri apfuura data reBlack Friday neCyber ​​Muvhuro. Kukupa rairo rakanakisa riripo, Joe Montgomery we250ok akabatana naCourtney Sembler, Inbox Professor kuHubSpot Academy, naCarl Sednaoui, Director weKushambadzira uye Co-Muvambi paMailCharts Iyo email data inosanganisirwa inouya kubva kuMailCharts 'ongororo yepamusoro 1000
Kuchenesa Kwedu Vanyori Vedu Runyorwa Kuwedzera kwedu CTR ne183.5%
China, April 20, 2017 China, Gunyana 24, 2020 Douglas Karr
Isu taigara tichishambadza pane yedu saiti kuti isu tanga tine vanopfuura 75,000 vanyoreri pane yedu email runyorwa. Kunyangwe icho chaive chokwadi, isu taive nenyaya inonetesa yekuendesa kwataive takanamatira mumafaira e spam zvakanyanya. Nepo vanyoreri makumi manomwe nemashanu vachitaridzika zvakanaka kana iwe uchitsvaga vatsigiri veemail, zvinotyisa kwazvo kana nyanzvi dzeemail dzichikuzivisa iwe kuti havasi kuwana yako email nekuti yanga ichinamira mune zvisina tsarukano. Iyo inoshamisa nzvimbo kune
Mutengo wekuyera Kununurwa Kuenderana neInbox Mitengo
Chipiri, February 2, 2016 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Kana ivo vePosvo Service vanga vaine gaba remarara panzvimbo yavo uye, pese pavanoona chidimbu chetsamba isina zvainouya ichiuya vaikanda yese mumarara, waizodaidza kuti yakasvitswa? Chokwadika kwete! Zvinoshamisa kuti, zvakadaro, muindasitiri yekushambadzira yeemail chero email inoendeswa kune spam folda inoverengwa sekuununurwa! Nekuda kweizvozvo, vatapi veemail tout yavo yekuburitsa mamaki sekunge ivo chinhu chekuzvikudza